« Académie de Valiha» : nitombo iray ny foibe fampianarana mozika | NewsMada
« Académie de Valiha» : nitombo iray ny foibe fampianarana mozika
Fantatra izao fa hisokatra tsy ho ela, eto an-dRenivohitra, ny foibe iray fikarohana sy fampianarana mozika. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fampianarana. Hanombohana izany ny zavamaneno malagasy be mpitia indrindra.
Ety am-piandohana, miompana tanteraka amin’ny fampianarana valiha ity foibe mitondra ny anarana « Académie de Valiha » ity. « Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena fampianarana mozika ny fianarana », hoy ny tompon’andraikitry ny fampianarana. Izany hoe, « ankoatra ny fahaizana mitendry valiha, hahay solfezy (naoty araka ny fafahalan’ny maro azy) ary ho afaka mampiaraka azy roa ireo (mitendry valiha manaraka solfezy) ny mpianatra havoakan’ity foibe ity rehefa vita ny fianarany », hoy hatrany ny tompon’andraikitra. Hizara dingana telo ny fianarana ka telo volana ny dingana tsirairay. Hisy « Certificat » omena isaky ny dingana, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitry ny fampianarana.
« Anisan’ny mitondra fahombiazana lehibe amin’ny fanabeazana sy fampivoarana ny maha olona ny fianarana mozika. Izany no nahatonga ny fiaraha-miasa eo amin’ny lycée privé Daniel sy ny « Académie de Valiha » », hoy i Ny Avo R. tompon’andraikitry ny fitantanana eo anivon’ity sekoly miorina etsy Andravoahangy Ambony ity, izay misy ny toerana fampianarana valiha (Académie de Valiha) rahateo. Ankoatra izay, nohazavainy fa mifameno tanteraka amin’ny fomba fampianarana misy ao an-toerana ny fijoroan’ity foibe ity satria sady mitana ny maha Malagasy kanefa mivelatra amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa.
Hisokatra ny asabotsy 21 oktobra izao, amin’ny 8 ora sy sasany maraina ny « Académie de Valiha ». Io rahateo no fihaonana voalohany eo amin’ireo rehetra vonona ny hianatra ny valiha (zavamaneno malagasy) sy ireo mpampianatra miantsoroka ny fampianarana.